Ajụjụ - The Kdom
FREE IPMIPAKA WWA N’ .WA EGO niile
Soro Your Order
EKPERE KDOM NA EGO NA-EKWU EGO NA NKWUKWU EGO NA-EGO NA-EGO NA-EZIARA EGO KWESICR AND NKWUKW ANDKWỌ NA-AK ANDKỌ.
Ebumnuche anyị bụ inye gị nhọrọ mbupu kacha mma, n'agbanyeghị ebe ị bi. Kwa ụbọchị, anyị na-ebugara ya narị narị ndị ahịa n'ofe ụwa, na-ahụ na anyị na-enye gị nza ọkwa kachasị oge niile.
Ugbu a, anyị na-enye Mbupu Kachasị Elu ụwa on akwa ihe dị n’ụlọ ahịa anyị.
Ajụjụ: Ebee Ka Ihe M Si Ebufe?
Ngwaahịa ọ bụla dịka akpụkpọ ụkwụ, akpa, ka a na-ebubata na Eshia. Ọ bụ ezie na ngwaahịa anyị si Eshia na-abịa, ọdịdị dị oke mma, oge mbufe anyị na-asọ mpi na ọnụahịa anyị enweghị atụ.
Ngwaahịa ndị ọzọ niile dị ka akwa e biri ebi (t-shirts, swaters, hoodies, ekwentị ekwentị, wdg) na-ebuga ya ozugbo site na ndị na-eburu anyị ya. United States.
A na-eji ụgbọ mmiri ebubata ihe ndị anyị na-ebugharị NKWUKWU DHL!
Ajụjụ: Ginị oge emere maka nzipu na oge iwu m?
Isi Ngwaahịa (T-shirts, Sweatshirts, Hoodies, jaketị, okpu, igwe mkpuchi, akpa azu, olu, ọla aka, mgbaaka, igbe ekwentị)
Oge Mmepụta: Daysbọchị 2-4
US, UK, CA, Oge nnweta nke AUS: 12-25 (EMS Na Ebe Nsuso)
US, UK, CA, AUS isi ngwaahịa iwu nke abịabeghị n'ime ụbọchị iri isii maka nhazi iji tozuo maka nkwụghachi ma ọ bụ debe n'efu.
Oge Mbuga Ozi Mba Nile: Izu 2-4 (Agaghị Achọpụta Nzuzo Ikpeazụ)
Iwu ụwa nke na-abịabeghị n'ime ụbọchị 60 nke nhazi nhazi tozuru oke maka nkwụghachi ma ọ bụ nnabata n'efu.
Oge Ntụle Nyefe: 10-14 ụbọchị (DHL) Na Ebe Nsuso)
Iwu ohiri isi ọ bụla nke abịabeghị n'ime ụbọchị 45 nke nhazi nhazi tozuru oke maka nkwụghachi ma ọ bụ nnabata n'efu.
Akwa Tote akpa
Oge Ntụle Nyefe: -10bọchị 14-XNUMX (DHL) Na Ebe Nsuso)
Ọ bụla ákwà Tote iwu na-adịghị rutere n'ime 45 ụbọchị nke iji nhazi bụ ruo eruo maka nkwụghachi ma ọ bụ free reshipment.
US, UK, CA, Oge nnweta nke AUS: 10-25 (EMS.) Na Ebe Nsuso)
US, UK, CA, AUS ndị ọrụ sock na-abịaruteghị n'ime ụbọchị 45 nke nhazi nhazi tozuru oke maka nkwụghachi ma ọ bụ mbugharị ọzọ.
Oge Akwukwo Zuru Mba nke Mba: 2-4 Izu (Agunye Njikọ Nchọpụta ikpeazụ)
Iwu ndị na-ahụ maka ndị ọrụ mba ụwa na-abịabeghị n'ime ụbọchị 60 nke nhazi nhazi nwere ike iru maka nkwụghachi ma ọ bụ mbugharị n'efu.
Akpụkpọ anụ Tote Akpụkpọ anụ na Akpa
Oge Mmepụta: Daysbọchị 4-6
Iwu akpa ọ bụla na-abịabeghị n'ime ụbọchị 45 nke nhazi nhazi tozuru oke maka nkwụghachi ma ọ bụ nnabata n'efu.
Akpa akpa ụmụ mmadụ
Oge Mmepụta: Daysbọchị 5-7
Akpụkpọ akpụkpọ ụkwụ
Ọ bụla akpụkpọ ụkwụ iwu na-abịarute n'ime ụbọchị 45 nke nhazi nhazi tozuru oke maka nkwụghachi ma ọ bụ mbugharị ọzọ.
Ajụjụ: Kedu mgbe m ga-enweta ozi nyocha na usoro m?
A ga-eme ka ọnụọgụ nọmba mata n'etiti etiti oge akọwapụtara n'okpuru ebe a ga-ezigara ndị ahịa ya akpaghị aka site na email enyere n'usoro ha.
Ekpu mkpuchi: mkpụrụ ụbọchị 5-7 ka enyere nhazi aka.
Akwa Tote akpa: 5-7 ụbọchị mgbe iji nhazi.
Ndị ọrụ sọks: 5-7 ụbọchị mgbe nhazi nhazi.
Akpụkpọ anụ Tote akpa: 7-10 ụbọchị mgbe iji nhazi.
Jirinụ Akpa: 7-10 ụbọchị mgbe nhazi nhazi.
Akpa akpa akwa Kanvas: 7-10 ụbọchị mgbe nhazi nhazi.
Akpụkpọ ụkwụ Canvas: 7-10 ụbọchị mgbe nhazi nhazi.
Ndị ọzọ: ụbọchị 5-7 ka emechara nhazi.
Ajụjụ: Gịnị kpatara na Onweghị Ihe Ochie Na-egosi Na Nọmba M Nsuso?
Maka iwu US nsuso nọmba ọnụọgụgụ nwere ike wepụta ụbọchị asaa ka emechara iwu maka nsuso data iji gosi. Dị njikere na ị na-eji ọnụọgụ nsuso ziri ezi ma ị nwere ike soro ya thekdom.com/pages/track-your-order
N'ihi na mba iwu nsuso nọmba nwere ike weghara ka 10 ụbọchị mgbe iji na e esichara maka nsuso data na-egosi. Dị njikere na ị na-eji ziri ezi nsuso nọmba na ị nwere ike soro ya na thekdom.com/pages/track-your-order. Ka dụọ gị ndụmọdụ, iwu mba ụwa anaghị akwụghachi otu ugboro ma ebubata ya ma agaghị egosiputa data nnyefe ọ na-aga.
Ajụjụ: Ọ ga-amasị m ịgbanwe / kagbuo iwu, kedu ka m ga-esi mee ya?
Anyị na-arụ ọrụ na ANY sales ahịa bụ iwu ikpeazụ. Nke a pụtara na ịnweghị ike ịkagbu, lọghachi, ma ọ bụ nata nkwụghachi maka iwu belụsọ na ọ bụ njehie na njedebe anyị.
Can nwere ike gụkwuo gbasara amụma nkwụghachi anyị Ebe a.
Ajụjụ: Enweghị m obi ụtọ na oke akpụkpọ ụkwụ na dabara. Kedu ihe m kwesịrị ịme?
Na ihe omume dịkarịsịrị njọ na onye ahịa anaghị enwe obi ụtọ maka akpụkpọ ụkwụ ha, anyị ga-ahazi onye ahịa azụ ahịa otu oge na - anaghị akwụ ụgwọ.
Agaghị eweghachi nkwụghachi maka imebi esemokwu ahụ, naanị agbanwere mgbanwe.
A ga-anabata Mgbanwe A na-akwụ ụgwọ naanị otu oge akpụkpọ ụkwụ. Ndị ahịa ọ bụla ga-akwụ ụgwọ metụtara mgbanwe mbụ gara aga maka mgbanwe mbụ n'efu.
Iji hazie mgbanwe agbanwere, ndị ahịa ga-enye ozi ndị a:
ihe kpatara akpụkpọ ụkwụ ahụ adaghị. (ntụgharị dị obere, buru oke ibu, ma warara)
Ikike ohuru nke onye ahia a choro
aha ndị ahịa na akara ọnụ ọgụgụ
A gaghị achọ ka ị weghachi akpụkpọ ụkwụ mbụ ahụ iji nweta mgbanwe mgbanwe n'okpuru iwu a.
Iji belata ihe egwu nke ibute nsogbu dị iche iche, anyị enyegoro onyunyo na ibe nkọwa ngwaahịa anyị akpụkpọ ụkwụ ukwu, suede akpụkpọ ụkwụ.
Arịrịọ mgbanwe nha nke dịgasị iche karịa nha 2 site na nha izizi nke izizi ga-ewere dị ka njehie ntinye ndị ahịa ma ọ gaghị tozuo maka mgbanwe.
Ajụjụ: Ọ na-ekwu na Adreesị My ahụghị
A: Anyị ji ụgbọ mmiri na-eji United States Post Office. Ọ bụrụ n’inwere igbe PO wee ghara inweta ozi na adreesị gị, ị kwesịrị iji igbe PO. Nyochaa ahụ nwere ike ịdị aghụghọ na nkepịrị. USPS.com “chọta koodu zip” nwere ike inyere gị aka ịchọta ndebiri okwu gị kpọmkwem na otu USPS ga-esi nyochaa adreesị gị.
Ajụjụ: Aghọtaghị m ihe eji eme ọfụma gị.
A: Ọ bụrụ na ị dọpụtara uwe ị nwere ugbu a dị mma ma tụọ n'ofe aka uwe gị, ị ga - enwe ike ịchọta ezigbo ihe na eserese anyị nke ga - abara gị uru. Cheta, nha ndị dị na eserese ahụ bụ maka uwe elu ahụ, ọ bụghị onye ahụ ezubere iyi ya.
Ajụjụ: Olee otu m ga-esi weghachite ma ọ bụ gbanye uwe m?
A: Biko zitere anyị Email na support@thekdom.com ma mee ka anyị mara ihe bụ nsogbu ahụ! Anyị ga-esoro gị rụọ ọrụ iji dozie okwu ahụ. Biko cheta, ndị a bụ uwe elu ndị e biri ebi, nke emere ka ịtụ. Ozugbo anyị bipụtara akwụkwọ, anyị enweghị ike ibipụta ya ma ọ bụ weghachi ya na ngwaahịa. Yabụ, anyị ga-agba mbọ rụpụta ihe iji hụ na afọ juru gị maka ịzụta gị!
Ọ bụrụ nkwụghachi kpebisiri ike na akwadoro ya, anyị ga-ahazi nkwụghachi maka ọnụahịa mbụ nke uwe a ngwa ngwa o kwere mee. Nkwụghachi ego na-ewerekarị ụbọchị ọrụ 1-3 iji hazie oge anyị nyere ha. Ọ bụrụ n ’ị ga-achọ ịgbanwe mgbanwe, biko gbaa mbọ tinye ozi ịkwụ ụgwọ maka mbufe mbugharị.
Ajụjụ: Enwere ndepụta mmebi n'akụkụ uwe elu m.
A: Somefọdụ uwe elu tupu e bipụta ya. Echegbula, ọ ga-apụ gị oge mbụ ị saa uwe ahụ.
Ajụjụ: I mere ihie na iwu m.
A: Anyị nwere nnukwu nwute. Ọ naghị eme ọtụtụ oge, mana ọ nweghị onye zuru oke. Email support@thekdom.com ma anyị ga - eso gị rụọ ọrụ ka ọ dị mma. Ọtụtụ mgbe, nke a ga-achọ naanị ka ị zitere anyị foto nke njehie anyị mere ka anyị nwee ike a) nyochaa nkwupụta gị na b) kpọọ gị iji mezie ya.
Ajụjụ: E nyere m iwu ihe 2+, mana natara naanị ... olee ebe ihe m nyere n'iwu bụ?
Anyị nwere nnukwu ngwongwo ndị ngwaahịa anaghị ebu n'ụlọ. Yabụ, mgbe ị nyere iwu ọtụtụ ihe n'otu oge, enwere ike ibupu ha iche ka ha nwee ike bịakwute gị ọsọ ọsọ. Inwere ike ịnata otu ihe tupu nke ọzọ, yabụ biko atụla ụjọ ma ọ bụrụ na ịnabataghị ihe gị niile otu oge, cheta na ha nọ n'ụzọ!
Ajụjụ: Olee otu m si mara webụsaịtị a dị nchebe?
Ọ bụ Shopify, bụ ụlọ ọrụ E-Azụmaahịa anyị maara nke ọma na-echebe anyị. Ọzọkwa, anyị na-ekwe nkwa nchekwa & nchekwa. A na-ahazi ịkwụ ụgwọ site na Shopify site na isi ụlọ ọrụ kaadị kaadị egosi na foto dị n'okpuru. Anyị enweghị ohere ịnweta ozi ọ bụla gbasara gị ma ọ bụ kaadị gị.
Download ANY M APOBR APP APP TODAY!
Onye mmekorita ya na anyi
Debanye aha iji nweta ihe ọhụụ na ahịa, mwepụta ọhụụ na ndị ọzọ…
© 2021 Kdom, A Registered Brand nke Leading Business Group llc. - Mere na ❤️ site TheKdom. Ziga anyị: support@thekdom.com